Ampidino Clean Master ho an'ny Windows
Maimaimpo Ampidino ho an'ny Windows (20.60 MB)
Ampidino Clean Master,
Sintomy madio ny tompoko
Clean Master dia mpanadio sy mamporisika solosaina maimaimpoana. Clean Master dia programa Windows miaraka amina endri-javatra lehibe toy ny mamafa ny tsy ilaina (fako) rakitra, manafaingana ny PC, mpanadio tsiambaratelo, fanarenana rakitra, fanavaozana ny fiara, fisie sisa tavela ho azy, mamafa ny rakitra sy ny lahatahiry, manadio auto browser, manavao ny mpamily ary manamboatra mpamily OLANA Clean Master PC sy Clean Master dia azo sintonina maimaim-poana aminny Android APK.
Clean Master dia programa fanadiovana solosaina novolavolaina ho anireo mpampiasa izay maniry hampiasa tsara ny solosainizy ireo ary manadio azy ireo isaky ny mahazo azy ireo mba tsy hihena ny zava-bitany. Clean Master, izay manafaingana ny solosainao aminny fanadiovana, dia programa tsara izay atolotra maimaim-poana.
Tsy mila mahafantatra zavatra fanampiny ianao raha hampiasa Clean Master, izay novolavola mitovy aminny famolavolana fampiharana finday mitovy aminny sokajy iray ihany. Miaraka aminny interface mora takarina aminy, ny programa, izay manolotra fampiasana bokotra iray, dia manampy anao hamafa ireo rakitra tsy ilaina (junk) rehetra voangona ao aminny solosainao.
Raha tsy mampiasa tsy tapaka ny solosainanao ianao dia mihangona arakaraka ny fandehanny fotoana ireto rakitra tsy ilaina ireto, mahatonga ny solosainanao hiadana ary hipetraka toerana tsy ilaina aminny kapila ao anaty solo-sainao. Raha mieritreritra ianao fa mampiasa am-pitandremana ary tsy misy rakitra tsy ilaina dia diso ianao. Satria ny rakitra tsy ilaina dia afaka manangona aminny faritra samihafa aminny solosainao rehefa mandeha ny fotoana, na dia tsy tianao aza izany. Indrindra raha efa ela no nampiasanao Chrome, Firefox ary ireo mpizaha tany hafa nefa tsy nodiovina, dia ho gaga ianao noho ny habenny rakitra tsy ilaina hiseho aorianny fizahana fitiliana.
Ny programa, izay mamela anao hamafa ny fisie junk rehetra aminny mpizaha, cache system, cache web, audio ary horonan-tsary, rakitra fisoratana anarana, mihoatra ny 2 GB eo ho eo, eny fa na dia aminny solo-sainanny mpampiasa solosaina mahazatra aza. Mahafinaritra tokoa ny afaka mamafa ireo fisie tsy ilaina ireo aminny tsindry tokana.
Raha te hampiasa haingana ny solosainanao sy haingam-pandeha ianao aminny fanadiovana azy ireo matetika, saingy kamo aminny zavatra hafa tokony hatao ianao dia tena hanoro anao ny hisintona Clean Master maimaimpoana aho ary andramo.
7 Antony fampidinana PC Master Madio
Diovy ny rakitra tsy ilaina (fako): manadio programa maherinny 1000 ny rafitra mandroso anny Master. Aminny tsindry iray dia azonao atao ny manadio ireo rakitra tsy ilaina (residual, fako) tavela eo aminny rafitra hamoahana tanteraka ny toerana fitahirizanny solosainao.
Fanafainganana ny PC: veloma aminny lagika rafitra! Aminny tsindry iray dia azonao atao ny mampiato ireo programa fanombohana tsy ilaina, manafaingana ny fotoana fanombohana ary manatsara ny rafitra sy ny fikirakirana tambajotra.
Fanadiovana tsiambaratelo: Afaka manala karazana risika tsiambaratelo 6 aminny tsindry iray ianao. Sakano ireo miditra an-tsokosoko ary esory ireo hazo fisaka mampidi-doza (fitetezana tranonkala) aminny alàlanny fanarahan-dia.
Fanavaozana ny mpamily: mamily sy manamboatra fitaovana sy mpamily mihoatra ny 5.000.000 ny Driver Booster. Raha fintinina dia afaka manamboatra olana aminny mpamily PC mora foana ianao.
Madio mandeha aminny saina marani-tsaina: fampandrenesana aminny fotoana tena izy ary fanadiovana mandeha ho azy ireo rakitra junk
Fampiroboroboana fampisehoana iray-tsindry iray: manatsara ny rafitra sy ny fikirakirana tamba-jotra hialana aminny fahatarana.
Mpanodikodina rakitra: esory tsara ny atinny fisie sy ny lahatahiry mora tohina ary tsy azo tononina ankoatry ny fanarenana
Haben'ny rakitra: 20.60 MB
Fanavaozana farany: 16-07-2021